Iibiyaha Dharka Gacanta Labaad ee Jumlada ee Shiinaha-Hisssen Global
Dharka Gacanta Labaad ee Sare Daad
Hissen Global wuxuu ku takhasusay dhoofinta dharka la isticmaalay, kabaha la isticmaalay, iyo bacaha loo isticmaalo gobollada sida Afrika, Koonfur-bari Aasiya, iyo Bariga Dhexe.
Iibiyaha dharka ee sare loo isticmaalo
U kala sooc dharka la isticmaalay oo tayo wanaagsan.
Ku siin wax ka badan 100 nooc oo shay ah oo aad doorato
Hababka kala-soocidda caadiga ah waxay naga caawiyaan inaan helno macaamiil joogto ah oo ka badan 60 waddan
Ku siin in ka badan 100 noocyada alaabta lagu xusho . Kala soocida heerka tayada darajada A: Wax wasakh ah ma leh, ma dillaacin, ma jiro kaniiniyo, ma jiro dalool, ma jiro si xad dhaaf ah loo isticmaalo, ma dhicin… waxa aan bixino waa kaliya in aan bixino xaalad wanaagsan, qaab moodo, midab leh oo nadiif ah! waxaa ka mid ah dharka la isticmaalay & kabaha gacanta labaad , Iyo bacaha la isticmaalo Hissen Global ayaa kuu soo diri oraahdii ugu dambeysay dharka xagaaga la isticmaalo iyo dharka jiilaalka loo isticmaalo xigasho la habeeyey ee tixraacaada!
Dharka xagaaga ee la isticmaalo
Dharka Jiilaalka ee la isticmaalo
Hissen caalami ah Co., Ltd waa mid ka mid ah shirkadaha dib u warshadaynta ee ugu darajada sareeya. Hissen wuxuu ku takhasusay dhoofinta dharka la isticmaalay, kabaha la isticmaalay, iyo bacaha loo isticmaalo Afrika, Koonfur-bari Aasiya, iyo dalalka Bariga Dhexe.
Warshada Hissen Global waxay ku dhowdahay aagga 10000 mitir murabac,Hissen qalabaysan 125 khadadka socodka iyo 200 shaqaalaha. Waxaan leenahay habab kala soocida caadiga ah ayaa naga caawiya inaan helno iibsadayaal badan oo joogto ah waddanka 60 adduunka oo dhan.
MAXAA LOO DOORANAY HISSEN GLOBAL
Sida alaab-qeybiyaha ugu fiican ee dharka gacan labaadka ah, Hissen Global waxa ay marka hore tayada u qaadaa sida falsafadeeda ganacsi oo ay ula dhaqanto danaha macaamiisheeda sida teeda kale. Waxaan ku guuleysanay kalsoonida macaamiisheena. Hel 80% qiimaha dib u dalbashada macaamiisha sanadka 2019
Hissen Global ayaa leh heerarka sare kuwaas oo soo iibsada alaabta ceeriin. badankoodana waxa laga soo ururiyaa qaar magaalooyinka heerka kowaad, sida Beijing, Guangzhou, Chongqing, Chengdu, Wuhan, iwm.
Sannadkii hore, Hissen waxa uu iibiyey dhar gacan labaad ah oo qiimo leh 50 milyan oo doollar wadamo badan oo aduunka ah.Hiseen waxa uu warshado ka dhisay Guangzhou, Chengdu.
Kormeerayaasha tayada leh ee tababbaran ayaa kormeero aan kala sooc lahayn ku sameeya qayb kasta oo alaabta la dhammeeyay. Habkani wuxuu xaqiijin karaa ka tayada sare ee dharka la isticmaalo
6 Bakhaarka Dibadda
Hiseen waxa ay Afrika ku leedahay lix bakhaar oo dibadda ah.Iyo in ka badan 300 oo dadka deegaanka ah ka shaqee bakhaarkeena Afrika
Khibradaha 10 sano
Hissen waxaa lagu aasaasay 2013, taas oo leh waayo-aragnimo qani ah ee berrinka dharka dumarka loo isticmaalo & dharka ragga loo isticmaalo&kabaha gacanta labaad&bacaha la isticmaalo.
Loo dhoofiyo 60 waddan
Alaabta Hissen ayaa loo dhoofiyay in ka badan 60 oo waddan Afrika, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Aasiya, iyo Koonfurta Ameerika. Badeecadaha Hissen Global waxaa si fiican uga mahadceliyey iibsadayaasheena.
Muuqaalka Warshada Dharka ee La Isticmaalay
HASSEN GLOBAL PARTNERS
Hissen Global waxa uu guul ka dhigay summadaha dharka gacan labaad ee jumlada maxaliga ah, oo ay ku jiraan CQS BEA Filibiin TRI STAR ee Tanzania SKR Nigeria, Hissen Global ma aha oo kaliya inay bixiso dhar gacan labaad oo tayo leh, laakiin sidoo kale waxay bixisaa adeegyo kor u qaadis si ay uga caawiso inay sameeyaan ganacsi dhar-gacan labaad ah oo jumlo ah guul dalkooda hooyo.
Waxaan kuu haynaa saddex nooc oo aad kala dooran karto waxaanan ku siinaynaa adeeg summada la habeeyey.
Caan ka ah wadamada Koonfur Bari Aasiya sida Filibiin, Indonesia, Pakistan, Malaysia, iwm.
Caan ka ah wadamada Afrika sida Nigeria, Kenya, Uganda, Tanzania, Namibia, iwm.
Caan ka ah wadamada Afrika sida Cameroon, Côte d'Ivoire, Benin, Congo, Ghana, iwm.